पुसदेखि सुरुङ खनिँदै - Manaslu Post
Manaslu Post १० मंसिर २०७७, बुधबार १०:०० 125 पटक हेरिएको
काठमाडौँ, । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण निर्धारित कार्यतालिकाभन्दा केही ढिला हुन गएको थानकोट–नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण कार्यले पुनः गति लिएको छ । पुस पहिलो हप्तादेखि सुरुङमार्ग खन्ने गरी तयारी भइरहेको सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले भन्नुभयो, “सुरुङमार्ग खन्न आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा छ । पुस पहिलो सातादेखि आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सुरु गरिनेछ ।” मङ्सिर पहिलो हप्तादेखि नै सुरुङ खनिने लक्ष्य रहे पनि कोभिड–१९ का कारण पूरा हुन नसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । सुरुङमार्गको मुखमा राखिने स्टिलको फ्रेम अहिले निर्माण भइरहेको बताउँदै आयोजना प्रमुख शाक्यले भन्नुभयो, “सुरुङ खन्न अब कुनै तयारी बाँकी छैन । फ्रेम निर्माण गरिरहेको बुटबलस्थित कम्पनीका कामदारमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिँदा कम्पनी केही समय बन्द भएकाले समयमा फ्रेम निर्माण हुन सकेन । पहिलो फ्रेम हाल्नुपर्छ, फ्रेम हालेको ८/१० दिनपछि सुरुङ खन्ने काम सुरु हुन्छ ।’’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा रहेको मुलुककै पहिलो आधुनिक उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अहिले आवश्यक जनशक्ति र उपकरण पूरा भइसकेकाले अब आयोजनाको काम बिनाअवरोध अगाडि बढ्ने र निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गएको कात्तिक ४ गते उक्त सुरुङमार्ग शिलान्यास गर्नुभएको थियो । आयोजना प्रमुख शाक्यका अनुसार अहिले कार्यस्थलमा २० जना जापानी प्राविधिकसहित दुई सयभन्दा बढी जनशक्ति काममा खटिइरहेका छन् । जापानबाट थप १५ जना प्राविधिक आउने तयारीमा छन् ।
निर्माणाधीन सुरुङमार्ग क्षेत्रमा परेको सिस्नेखोलालाई अहिले व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ । आठ इन्च वृत्ताकार नाला बनाएर स्थायी रूपमा खोला व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।
एलिशा थापा मगरलाई १४
केपी ओलीलाई तह लगाउन
प्रचण्ड-नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन,
एलिशा थापा मगरलाई १४ वर्षमै ब्लड क्यान्सर, उपचार गर्न आर्थिक अभाव
भरत भट्ट र तुलसा पुनको सुन्तलाको दाना सार्वजनिक (भिडियो सहित)
पहिलो महिला सिपाही जसले सकिन् ‘प्रतिविद्रोह तथा जंगल युद्धकला तालिम’
प्रचण्ड-नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन, प्रहरीको यस्तो निर्देशन
के हो पाठेघरको मुखको क्यान्सर ? कारण, लक्षण र रोकथामका उपाय
१६ वर्षीया किशोरी काका र हजुरबुबा नाता पर्नेबाट बलात्कृत
संवैधानिक इजलासले माग्यो संसद विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना
केपी ओलीलाई तह लगाउन सकेनौं – प्रचण्ड
सिन्धुलीमा बञ्चरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या
असफल भईरहनुहुन्छ ? सफलता ‘१० सुत्रहरु’ जान्नुहोस्
झनक्क रिस उठ्छ ? यसरी गर्नुहोस् नियन्त्रण